Nzvimbo tsvene yetemberi (1-4)
Madziro nedzimba dzemumikoto (5-11)
Chivakwa chekumavirira (12)
Kuyerwa kwezvivakwa (13-15a)
Mukati menzvimbo tsvene (15b-26)
41 Akabva andipinza muimba yekunze yenzvimbo tsvene,* akayera madziro emumativi mesuo rayo; chidziro chekuruboshwe chaiva neupamhi hwemakubhiti* 6 uye ndizvo zvakanga zvakaitawo chekurudyi. 2 Suo racho rakanga rakafara makubhiti 10, uye rimwe divi rechidziro chimwe nechimwe raiva nemakubhiti 5. Akayera imba yacho, rimwe divi rayo rikaita makubhiti 40, rimwe racho rikaita makubhiti 20. 3 Akabva apinda mukati* akayera madziro aiva mumativi mesuo, uye chidziro chimwe nechimwe chaiva neupamhi hwemakubhiti maviri, chiine makubhiti 7 kune rimwe divi, uye suo racho rakanga rakafara makubhiti 6. 4 Akayera imba yaiva yakaganhurana neimba yekunze yenzvimbo tsvene, uye yainge yakafara makubhiti 20, rimwe divi rayo rakafarawo makubhiti 20.+ Akabva ati kwandiri: “Iyi ndiyo Nzvimbo Tsvenetsvene.”+ 5 Akayera madziro etemberi yacho, uye aiva neupamhi hwemakubhiti 6. Mikoto yakakamurwa-kamurwa kuita dzimba, iyo yaiva yakapoteredza temberi yacho, yaiva yakafara makubhiti 4.+ 6 Mikoto yacho yainge iri nhurikidzwa nhatu, panhurikidzwa imwe neimwe paine dzimba 30. Madziro ese etemberi yacho akanga akagadzirwa achiiswa pekugadzikira matanda enhurikidzwa dzacho, kuti madziro acho asazoboorwa.+ 7 Kumativi maviri etemberi yacho kwaiva nemumwe mukoto waimonereka,* uchiita uchiwedzera kufara pawaikwidza kunhurikidzwa dzekumusoro.+ Mukoto wacho waiita uchiwedzera kufara kubva pane imwe nhurukidzwa kuenda pane imwe zvekuti munhu paaikwira kubva panhurikidzwa yepasi opfuura neyepakati achienda kune yekumusoro, aiona uchiwedzera kufara. 8 Ndakaona kuti kumativi ese etemberi yacho kwaiva nechikuva chakakwirira. Dzimba dzacho dzemumikoto dzaiva nefaundesheni yainge yakakwirira netsanga yakazara yemakubhiti 6, kunosvika pakona. 9 Madziro ekunze edzimba dzacho dzemumikoto, aiva neupamhi hwemakubhiti 5. Paiva nenzvimbo yakasiyiwa isina chinhu* yaiva kunze kwemadziro edzimba dzacho dzemumikoto, idzo dzaiva dzakabatana netemberi yacho. 10 Pakati petemberi nedzimba dzekudyira+ paiva nenzvimbo yakanga yakafara makubhiti 20 kudivi rimwe nerimwe. 11 Kuchamhembe kwaiva nesuo raipinda mudzimba dzemumikoto, uchibva munzvimbo yakasiyiwa isina chinhu, uye paivawo nerimwe suo rekumaodzanyemba. Nzvimbo yakasiyiwa isina chinhu kumativi ese etemberi yakanga yakafara makubhiti 5. 12 Chivakwa chaiva kumavirira icho chaiva chakatarisana nenzvimbo isina chinhu chakanga chakafara makubhiti 70, chiine makubhiti 90 kune rimwe divi. Madziro echivakwa chacho aiva neupamhi hwemakubhiti 5. 13 Akayera temberi yacho, uye yakanga yakareba makubhiti 100. Nzvimbo isina chinhu, nechivakwa chacho,* nemadziro acho, zvakanga zvakarebawo makubhiti 100. 14 Kumberi kwetemberi yacho kudivi rekumabvazuva, pamwe chete nenzvimbo isina chinhu, kwaiva nemakubhiti 100. 15 Akayera kureba kwechivakwa chainge chakatarisana nenzvimbo isina chinhu kumashure kwetemberi pamwe chete nemikoto yaiva kumativi acho maviri, uye pakaita makubhiti 100. Akayerawo imba yekunze yenzvimbo tsvene, neimba yemukati,+ nemavharanda echivanze, 16 pamwe chete nezvidimbati,* nemahwindo aiva nemafuremu aienda achiita madiki,+ nemikoto yaiva muzvinhu zvitatu izvozvo. Pedyo nechidimbati pakanga pakarovererwa mapuranga+ kubva pasi kusvika pamahwindo; uye pamahwindo acho pakanga pakavharwa. 17 Akayera pamusoro pesuo, uye mukati metemberi nekunze, nemadziro acho ese. 18 Yaiva nemifananidzo yemakerubhi nemifananidzo yemichindwe yakaita zvekutemererwa.+ Pakati pemakerubhi maviri ega ega paiva nemufananidzo wemuchindwe, uye kerubhi rimwe nerimwe raiva nezviso zviviri. 19 Chiso chemunhu chainge chakatarisa kumuchindwe wekune rimwe divi uye chiso cheshumba* chainge chakatarisa kumuchindwe wekune rimwe divi.+ Zvainge zvakatemererwa saizvozvo mutemberi yacho yese. 20 Pamadziro enzvimbo tsvene, kubva pasi kusvika pamusoro pesuo, painge pakatemererwa makerubhi nemichindwe. 21 Magwatidziro* enzvimbo tsvene aiva akaenzana mativi ese.+ Pamberi penzvimbo tsvene* paiva nechimwe chinhu 22 chaiita seatari yemapuranga+ chakanga chakakwirira nemakubhiti matatu, chakafara makubhiti maviri. Chaiva nemapango epamakona, uye pasi pacho nemativi acho zvakanga zvakagadzirwa nemapuranga. Akabva ati kwandiri: “Iyi ndiyo tafura iri pamberi paJehovha.”+ 23 Pasuo reimba yekunze yenzvimbo tsvene paiva nemadhoo maviri,+ uye ndizvo zvainge zvakaitawo imba yemukati. 24 Dhoo rimwe nerimwe raiva nezvipenga zviviri zvaipeteka. 25 Pamadhoo enzvimbo tsvene paiva nemifananidzo yemakerubhi neyemichindwe, yainge yakafanana neyaiva pamadziro acho.+ Pavharanda racho paivawo nechikamu chedenga chemapuranga chaibudikira kunze. 26 Uye paiva nemahwindo aienda achiita madiki+ nemifananidzo yemichindwe kumativi maviri evharanda racho nepadzimba dzemumikoto dzaiva kumativi etemberi nepachikamu chedenga chaibuda kunze.
^ ChiHeb., “yetemberi.” Muzvitsauko 41 ne42, mashoko ekuti “nzvimbo tsvene” akashandiswa achireva zvese imba yekunze neimba yemukati yetemberi.
^ Kureva, imba yemukati yenzvimbo tsvene, kana kuti Nzvimbo Tsvenetsvene.
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva masitepisi aimonereka.
^ Panofanira kunge pachireva nzvimbo diki yekufamba nayo yaitenderera temberi.
^ Kureva, chivakwa chekumavirira kwenzvimbo tsvene.
^ Kana kuti “cheshumba yava nezenze.”
^ ChiHeb., “Gwatidziro.” Panofanira kunge pachireva suo rekupinda muimba yekunze yenzvimbo tsvene.
^ Panofanira kunge pachireva Nzvimbo Tsvenetsvene.